I-Telefónica iyamangalisa kwaye ihambela phambili phantse ngama-5% | Ezezimali
Enye yeendaba ezinamandla eziye zaveliswa kule veki ibaluleke kakhulu, kwaye kwangaxeshanye, ukunyuka okungalindelekanga kwizabelo zeTelefonica. Nje ukuba kwaziwe ukuba bekukho isivumelwano malunga ne Brexit phakathi kweBritani enkulu kunye neManyano yaseYurophu, kunye ne-Italiya, banokufikelela kuqikelelo kuhlahlo-lwabiwo mali ngokubanzi. Ezi ndaba zilunge kakhulu kwiimarike zesitokhwe zaseSpain kwaye ngakumbi kwinkampani ekhokelayo kwicandelo lokunxibelelana ngomnxeba.
Kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35, kukho ophumeleleyo ogqame ngaphezu kwamanye amaxabiso. Ayisiyonto ngaphandle kokuncipha kweTelefonica kude kube ziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo okuphawule ukuxabiseka kwixabiso layo kwimarike yemasheya phantse yeepesenti ezintlanu kule veki inomdla apho imarike yestokhwe ithi ndlela-ntle kwinyanga ka-Novemba. Ewe, enye yezinto ezicacileyo ezibangela ukuba le nyathelo libukhali kumgangatho weparquet kungenxa yokulindelweyo okwenziwe phakathi kwabatyali zimali ngu ukuthengiswa kweeasethi kuMbindi Merika. Zifunyenwe kakuhle iindaba ezivela kuzo zonke iiarhente ezisebenza kwimarike yemasheya.
Kwelinye icala, kwaye njengoko kubonakala kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo, inkampani yesizwe yokunxibelelana ngomnxeba inakho ngena 2.000 izigidi yee-euro ngokufanayo. Inokuthi ibe nefuthe elihle kwiziphumo zeeakhawunti zakho zeshishini. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Akumangalisi ukuba lixabiso le-Ibex 35 eye yaphakama kakhulu ngoMvulo odlulileyo, nangaphezulu kwamaqela amakhulu ezemali.
1 I-Telefónica: iindaba ziyayithanda
2 Indlela ye-euro ngesabelo ngasinye
3 Baxabisa ixabiso labo ekujoliswe kulo kwi-9 euro
4 Ngaba ixabiso lingaqhubeka ngakumbi?
5 Amaqhinga ngeli xabiso
6 Ukusebenza kweshishini
I-Telefónica: iindaba ziyayithanda
Kuyinyani ukuba ukusebenza kule veki ngumnxeba osisalathiso kukhuthazwe ngokusebenza kakuhle kweyona indices yeemarike zentengiso. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba ngoMvulo ophelileyo i-Ibex 35 ivaliwe kumanqaku ayi-9.100, emva kokuxabisa i-1,96%. Ngelixa ngokuchaseneyo, i Amashishini ase-Itali inyuke nangakumbi, ngakumbi i-1,45%, i-Ftse 100 yenze njalo nge-1,20% kunye ne-Cac 40 yeFrance engummelwane wethu ingaphantsi nje kwe-1%. Ukumangalisa uninzi lwabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngokubhekisele kwinkampani yezonxibelelwano yaseSpain, kuye kwaxutyushwa ngenye into eneendaba. Akumangalisi ukuba iDublin Stock Exchange (i-Ireland) iqinisekisile ukuba iTelefonica idlulise inkqubo ye Ukukhutshwa kwetyala ukuba sele inje kumgangatho waseLondon, ngenxa yokungaqiniseki okubangelwe kukuphuma kwe-United Kingdom kwi-European Union (EU). Esi sicwangciso sifikile eluntwini kwaye sichaphazela isixhobo setyala kwinkxaso-mali yaso iTelefonica Emisiones, exabisa i-40.000 yezigidi zeerandi kwaye, ukusukela ngoku ukuya phambili, ziya kudweliswa kwimarike yemasheya yaseDublin.
Indlela ye-euro ngesabelo ngasinye
Ngayiphi na imeko, into ayenzileyo ikukuyekisa ukuthengisa kwakhe ngoku kwaye oko kuye kwakhokelela ekubeni acaphule kufutshane kakhulu kwi-euro ezingama-7 ngesabelo ngasinye. Inqanaba elingabonwanga kuninzi, kodwa iminyaka emininzi. Okwangoku kuthengiswa kwi-stock exchange yaseMadrid kwi-7,70 ye-euro ngesabelo ngasinye, nangona kuyinyani ukuba kufuneka ityise kwaye ifumane ukonyuka okubalulekileyo kule veki. Apho kuhlaba umxhwele ukuba ezi ziveliswe ngomthamo obalulekileyo weshishini. Kwaye eli candelo linika ubunyani obukhulu kolu nyuso kwelinye lamaxabiso esalathiso sezabelo zaseSpain.
Ngelixa ngokuchaseneyo, baninzi abatyali mali abancinci nabaphakathi abakhuthazekileyo ukuba bavule izikhundla kweli xabiso phambi kwe amaxabiso aphantsi ethengisa ngayo. Akumangalisi ukuba abanye abahlalutyi bezemali becebise kwiveki ephelileyo ukuba lixesha lokuba babuyele kwizikhundla zonxibelelwano zikazwelonke. Ngale ndlela, ayothusi into yokuba izandla ezomeleleyo zentengiso ziqokelele izihloko ezininzi ekupheleni kwangoLwesihlanu weveki ephelileyo. Umkhondo malunga nento enokwenzeka kwiintsuku kamva nasemva kweveki.
Baxabisa ixabiso labo ekujoliswe kulo kwi-9 euro
Kwelinye icala, asinakulibala ngeli xesha ukuba ixabiso ekujoliswe kulo kwinkampani edweliswe kwii-equity lijikeleze i 9 euro ngesabelo ngasinye. Oku kuyo nayiphi na imeko, oko akuthethi ukuba kuya kuyiphumeza, kodwa ngokuchaseneyo luqikelelo olunikezelwe ngabalamli bezemali ukwenza imisebenzi. Apho ngaxa lithile okanye elinye linokucaphula kula maxabiso achazwe njengexabiso ekujoliswe kulo kwaye aqwalaselwa amaxesha ngamaxesha.
Kwelinye icala, kufuneka siqwalasele ukuba le yimarike yemasheya ekungekho kudala ukuba ithengiswe kufutshane kakhulu namanqanaba e-14 yeuros ngesabelo ngasinye. Lixabiso elingagunyazisiyo ukuba liyakufikelela kwakhona, nangona liya kufezekiswa ixesha eliphakathi okanye elide. Injongo ngokufutshane kukufikelela kwi-9 okanye kwi-10 ye-euro, emele ngaphezulu kwe-10% njengokubakho kohlaziyo ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Ngaba ixabiso lingaqhubeka ngakumbi?
Ngayiphi na imeko, omnye wemibuzo abatyali mali abancinci nabaphakathi bayazibuza yona ingaba basenawo na umda yehla kwixabiso layo. Ewe, yonke into iya kuxhomekeka kwindlela ezenzeka ngayo iimarike zokulingana ukusukela ngoku. Kuba okunene, ukuba oku kuyinto engalunganga, akukho mathandabuzo ukuba isenzo senkampani yemfonomfono yaseSpain inokuhla. Akuninzi, kodwa ubuncinci indlela yokuvavanya inkxaso ekhoyo ngoku kwi-6,20 euro. Ngayiphi na imeko, uluvo lwabahlalutyi bezezimali kukuba eyona nto imbi kakhulu kwindaleko sele ibonile, izithathela ingqalelo zonke iindaba ezimbi ezivelisileyo kwiinyanga ezidlulileyo.
Kuyinyani, kwelinye icala, ukuba ukwehla kwinzuzo yayo kudlale ngokuchasene nokuziphendukela kwemveliso kwintengiso yesitokhwe. Ngale ndlela, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokuqwalaselwa kakhulu kokulandelayo Iziphumo zekota Ukuchonga ukuba lixesha elifanelekileyo na lokuvula izikhundla kweli xabiso libalulekileyo lezabelo zeSpain. Nokuba ungathenga ngomsindo ngenxa yamaxabiso amahle athengiswayo ngoku. Nangona isenokuhla ngakumbi kwiinyanga ezizayo.
Amaqhinga ngeli xabiso
Kukho into ebonakala ngokufana kukhetho lwabahlalutyi abaphambili bezemali kwaye ezo zabelo zale nkampani zidwelisiweyo zijolise kulo mzuzu thenga kunokuthengisa. Akumangalisi ukuba bathengise ngesaphulelo esibalulekileyo kwixabiso labo ngenxa yokusikwa kwabo kutshanje kuqingqo-maxabiso lwabo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba bayabonisa ukuba ayibonisi xabiso lokwenyani ekufuneka linikezwe yinkampani yezonxibelelwano kuba ihlaselwe zizikhundla ze-bearish ngobukrakra obukhulu ngokubhekisele kubunzulu bentshukumo.
Ke ngoko, ukoyisa inkxaso elandelayo esondele kakhulu kwii-euro ezingama-8 ingayinto enomdla kakhulu ukuvula izikhundla ngenjongo yokulinda ukunyuka ukuya kwi-9 okanye kwi-10 ye-euro kwaye wenze ukonga kulondoloze ixesha elingagqithisiyo. Hayi ngelize, umngcipheko oqhutywa ziinkampani ezincinci neziphakathi awuphakami kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo ungaphantsi kwamanye amaxabiso e-Ibex 35. Ngale ndlela, ulingano phakathi inzuzo kunye nomngcipheko Lelinye lolona khuphiswano lunikezelwa ngoku zizabelo zaseSpain.
Enye into ekuya kufuneka ijongane nayo kwezi veki zizayo yile inento yokwenza nayo iintshukumo zecandelo. Ayothusi into yokuba kulindeleke ukuba kubekho ukuthengwa okukhulu, njengoko kwenzekileyo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngale ndlela, onke amehlo ajonge kwiTelefonica enokuthi isebenze ngokubaluleka okuthile kwaye inokuthi izuze phi kuyo. Ngokuqinisekileyo oku kunokuba ziindaba ezilungileyo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi abanokubona ukuba utyalomali lwabo kwimarike yemasheya lonyuka.
Ezi ntshukumo zidibeneyo azizukujolisa kuphela kumazwe okusingqongileyo kweYurophu, kodwa kwelinye icala leAtlantic. Apho indima edlalwa yiTelefonica ibaluleke kakhulu, kumazwe afana neBrazil neMexico. Ngale ndlela, iya kuchaphazeleka nakukuvela kweemarike ezisakhulayo, ngandlela ithile okanye enye. Ngale nto ukungazinzi kwayo kuya kubonakala ngakumbi kwaye umahluko phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye namaxabiso asezantsi uya konyuswa. Into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo incede ukwenza urhwebo lube luncedo ngakumbi kubo bonke abatyali mali. Njengesicwangciso esitsha sokuphuhlisa utyalomali ukusuka kwindawo eyahlukileyo yokujonga ukusukela ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Telefónica iyamangalisa kwaye ihambela phambili phantse ngama-5%